निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अन्तिम चरणमा, कुन प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र ? - Medianp
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अन्तिम चरणमा, कुन प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र ?
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २८, २०७४०८:२४0
काठमाडौं, २८ साउन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।
२४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नयाँ संविधान अनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउन गठित आयोगगले जनसंख्या र भुगोलको आधारमा क्षेत्र निर्धारणको काम लगभग टुंग्याएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार अहिले मूल प्रतिवेदन लेखन र निर्धारण भएका क्षेत्रलाई अन्तिमरुप दिन छलफल भइरेको छ । निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन दिनु पर्ने बताइरहेका बेला आयोगले भदौ पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार आयोगले प्रदेश नम्बर तीनमा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्र, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, र १ नम्बर प्रदेशमा २८ वटा, ४ नम्बर प्रदेश मा १८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा ३३ र सबैभन्दाकम ६ नम्बर प्रदेशमा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसैबीच आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पछि प्रदेश सभाको क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर प्रदेश सभाको दुई निर्वाचन क्षेत्र हुने छ ।
सिन्धुलीमा पहिराले घर पुरिँदा चारको मृत्यु
उत्तर कोरियाका यी हतियार जसले अमेरिकाको समेत सातो उड्छ